﻿ इटहरीमा फोहोर केलाई ? – सडकलाई
इटहरीमा फोहोर केलाई ? – सडकलाई
आइतबार २२, भदौ २०७६
इटहरी । इटहरी चोक बजारमा केही वर्षअघिसम्म फोहोर मलाई लेखिएका सिमेन्टेड रिङ हरु देखिन्थे । त्यहाँ लगेर फोहोर राखिन्थ्यो । नगरपालिकाको गाडी पुगेर उठाउँथ्यो ।
अहिले विकासक्रमसँगै इटहरीमा मानिस बढे । आवतजावत बढ्यो । तर फोहोर संकलन गर्ने तथा संकलित फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम पहिलेभन्दा अस्तव्यस्त छ । इटहरीको फोहोरलाई नष्ट वा प्रशोधन गर्ने त कुरै छाडौं, संकलनको समेत राम्रो व्यवस्था छैन । चोक बजारमा फोहोर फाल्ने ठाउँ नै छैन । वरपरका व्यवशायीदेखि आगन्तुकसम्मले फोहोर बाटैमा खन्याउँछन् ।
इटहरीलाई सफा राख्न इटहरी उपमहानगरपालिकाले मासिक चार लाख रुपैया बढी खर्च गर्छ । बेला बेलामा विभिन्न संघसंस्थाले सरसफाई कार्यक्रम पनि गरिरहेकै हुन्छन्, तर मुख्य चोकमा फोहोर फाल्ने एउटै डस्टबिन छैन ।
स्थानीय व्यवशायीहरु केहीले पोकोमा फोहोर संकलन गरेर राख्छन् र फोहोर उठाउने गाडीलाई दिन्छन् । तर केही पसल भने साँझ बन्द गर्ने बेलामा बाटोमा फोहोर खन्याएर हिड्छन् । अनि बाहिरबाट आउने यात्रुहरुसँग त झन् बाटैमा फोहोर फाल्नुको विकल्प छैन ।
सडकमा फालिएका फोहोरहरु एकातिर छाडा पशु चौपायाले तितरबितर बनाइदिन्छन् भने अर्कोतिर चाडपर्वको समयमा कहिलेकाहिँ दुई–तीन दिनसम्म पनि नउठ्दा चोक बजार भरी फोहोर छरिने गरेको छ ।
इटहरी नगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा वेस्ट इन्भारो मेनेजमेन्ट कम्पनिले लिएको छ । उक्त कम्पनिले फोहोरबाट बायोग्याँस निकाल्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको र मेसिन किन्ने तयारीमा रहेको कम्पनिका व्यवस्थापक मानध्वज मोक्तान बताउँछन् ।
तर फोहोर संकलन तरिका नै प्रभावकारी छैन भने उठाइएको फोहोर पनि ल्याण्डफिल्डको साटो जंगलमा लगेर जलाइने गरिएको छ ।
नगरपालिकाले १३ करोड खर्चेर ल्याण्डफिल्ड साइड बनाइदिएको छ, तर कम्पनिले मेसिन किन्न नसक्दा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
यता इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि डस्टबिन राख्ने विषयमा त्यती चासो दिएको छैन । योजना अघिल्लै वर्ष बनाएपनि तदारुकता नदेखाएको हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्प चौधरीका अनुसार डस्टबिन राख्न ४० लाख रुपैया बजेट छुट्याइएको छ । यो वर्ष भने नगर क्षेत्र र घरहरुलाई समेत डस्टबिन वितरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । यसको लागि विभिन्न संघसंस्थासँग सहयोग मागिने उनको भनाई छ ।
सोलुखुम्बुमा पुनः हिमपात, जनजिवन प्रभावित